Laamaha Markhaatiyaasha Yehowah Shaqadee Bay Sameeyaan?
Laamaha Shaqadee Bay Sameeyaan?
Siday u daryeelaan hawsha wacdiga oo ka jira hal ama dhowr waddan reer Beytel hawlo fara badan bay sameeyaan oo u kalabaxa qaybo badan. Majalladahay daabacaan, buugaggay sameeyaan wargeysyadayna qorsheeyaan. Waxay ka shaqeyn karaan kooxyada turjumaadda, muuq iyo maqalka ama waxyaalo kale oo ku saabsan waddammada ay daryeelaan.
Guddiga Laanta baa kor ilaaliso hawlaha la qabto. Guddiga Maammulka masʼuuliyadda laamaha waxay ku aammineen koox la yiraahdo Guddiga Laanta oo ka sameysan odayaal waaya arag ah. Guddiga Laan walba waxaa ku jira saddex oday ama in ka badan. Guddiga Maammulka bay u sheegaan horumarka hawlaha waddammada ay masʼuul ka yihiin iyo dhibaatada ay la kulmaan. Warbixintan oo kale waxay ku caawisaa Guddiga Maammulka inay doortaan waxyaalaha shirarka iyo wargeysyada iyo kulammada laga hadli doono. Guddiga Maammulka si joogta ah wakiillo bay laamaha u soo diraan. Wakiillada waxay bixiyaan tilmaan ku caawiso Guddiga Laanta inay fuliyaan hawshooda. (Maahmaahyadii 11:14) Sida loo guubaabiyo walaalaha deggan waddammada ay laanta ka masʼuul tahay waxaa la qabtaa kulan gaar ah. Kulankan waxaa ka tirsan khudbad uu wakiilka xarunta maammulka dhiibo.
Kiniisadaha ay masʼuul ka yihiin bay taageeraan. Asaasidda kiniisadaha cusub waxaa fasaxo walaalo masʼuul ah oo laamaha ka adeego. Waxayna hoggaamiyaan hawlaha horseedyada, hoggaamiyayaasha safro iyo kuwa waddankooda loo soo diray inay wacdiyaan. Waxay abaabulaan shirarka yar iyo kuwa weyn iyo dhismada Hoolalka Boqortooyada. Waxayna hubiyaan kiniisadaha in loo diro wargeysyaday u baahan yihiin. Shaqada laamaha awgeed si hagaagsan baa hawsha wacdiga loo fuliyaa.—1 Korintos 14:33, 40.
Guddiga Laamaha sidee bay u taageeraan Guddiga Maammulka?
Laamaha maxay masʼuul ka yihiin?
Waan kugu soo dhoweynaa inaad laamaheenna mid ka mid ah soo booqatid. Isniin ilaa Jimce way furan yihiin sida lagugu soo wareejiyo. Markaad imaatid u labbiso sidii adoo kulan u socotid. Booqashada Beytel iimaankaaga ayay kordhin doontaa.
Wadaag Wadaag Laamaha Shaqadee Bay Sameeyaan?